Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » IJapan iphelise imeko yongxamiseko ye-COVID-19 kule veki
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Urhulumente waseJapan nangona kunjalo uxelwa ukuba uvumela iirhuluneli ukuba zisebenzise iindlela zokulwa ze-COVID-19 zenyanga emva kokuphela kwezithintelo ezikhoyo.
Imeko yesihlanu yaseJapan ye-COVID-19 yexesha likaxakeka iyeyona inde kakhulu ngobhubhani.
Inkulumbuso yaseJapan ithe urhulumente wakhe uzakuthatha isigqibo ngokusesikweni ngolwe-Lwesibini ngokuhlwa.
Isimo sexakeka se-COVID-19 sithetha nje sigubungela iTokyo kunye nezithili ezili-18 kwilizwe liphela.
Urhulumente wase-Japan kulindeleke ukuba angayandisi imeko ye-COVID-19 engxamisekileyo egubungela iTokyo kunye ne-18 zelizwe lonke xa iphela ekupheleni kuka-Septemba, imithombo yeendaba zikarhulumente ithe ngoMvulo.
Inkulumbuso yaseJapan uYoshihide Suga
Imeko kaxakeka yesihlanu yesizwe, eyaqala ukubhengezwa kwizithili ezine ngo-Epreli, iyeyona inde kakhulu. Yandiswa yaya kwizithili ezingama-25 ezongezelelweyo ngaphambi kokuba iphakanyiswe ngoJuni kuyo yonke ngaphandle kweOkinawa. Umyalelo waphinda wanikezelwa eTokyo ngoJulayi, nangona kunjalo, emva kokuvuka kwakhona kwaqala ukuvela kwikomkhulu ngasekupheleni kukaJuni.
Leli lizwe Inkulumbuso uYoshihide Suga uxelele oonondaba ukuba urhulumente wakhe uzakuthatha isigqibo ngokusesikweni ngolwe-Lwesibini ngokuhlwa kulandela iingxoxo neengcali zezifo ezosulelayo ezivela kwikomkhulu likarhulumente eliphambili le-coronavirus.
Nangona kunjalo, uSuga wongeze ukuba kuyimfuneko ukunciphisa izithintelo ze-COVID-19 ngokuthe ngcembe.
If JaphanImeko yonxunguphalo, esebenza njengangoku kwizithili ezili-19, isuswe ngokupheleleyo, iyakuba sisihlandlo sokuqala ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli ukuba kungabikho zithintelo ziphantsi kothintelo lukarhulumente lwe-COVID-19.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho namnye kwizithili ezili-19 ocele ukongezwa kwexesha likaxakeka.
"Kubonakala ngathi urhulumente uzokwazi ukususa imeko engxamisekileyo njengoko bekucwangcisiwe ukuphela kwenyanga," utshilo umphathiswa wezempilo uNorihisa Tamura ngexesha lenkqubo kamabonakude ngeCawa.
Ngelixa amatyala amatsha esihla, uTamura walumkisa uluntu ukuba lungayekeli ukugada ngenxa yokoyika ukubangela ukubuyela ebusika. Uye wongeza ukuba uthintelo olwahlukeneyo, kubandakanya nokuncitshiswa kweeyure zeshishini zokutyela kunye neebhari, kufuneka zikhululwe ngokuthe chu, kwaye amagosa kufuneka aqinise amandla okhathalelo lwempilo-ngokuseka amaziko ongezelelweyo abaguli abaphuphumayo. kunye nokufumana abasebenzi bezonyango, phakathi kwezinye izinto - ukulungiselela uqhambuko olulandelayo.
Kwiveki ephelile, JaphanUmlawuli wokugonya uTaro Kono ubhengeze ukuba eli lizwe liza kuqala ukusebenza nge-COVID-19 booster abasebenzi bezonyango ekupheleni konyaka, nakubantu abadala kulo nyaka mtsha.
Ukusukela ngoMvulo, malunga neepesenti ezingama-52 yabemi baseJapan bebefumene iidosi ezimbini zokugonya i-COVID-19.